သာသနာညိုးနွမ်းစေမှုနဲ့ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မုံရွာအကျဉ်းထောင်မှာ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ စာရေးဆရာ ဦးထင်လင်းဦးကို ချောင်းဦးမြို့နယ်တရားရုံး မှာ ဒီကနေ့ ရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့ရာ တရားလိုပြ သက်သေ တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ သုံးပန်လှစံပြကျေးရွာက ကျေးရွာအုပ် ချုပ်ရေးမှူး ဦးဝင်းနိုင်ကို စစ်ဆေးမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။
တရားရုံးချိန်းမှာ တရားလိုပြသက်သေ ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးဝင်းနိုင် ထွက်ဆိုခဲ့တာနဲ့ ဦးထင်လင်းဦး ကို အာမခံပေးဖို့ ၃ ကြိမ်မြောက် တင်ပြမှု ပယ်ချခံရတာ ကို ဦးထင်လင်းဦးရဲ့ ရှေ့နေ ဦးသိန်းသန်းဦးက အခုလိုပြောပါတယ်။
"ဒီနေ့ ကိုထင်လင်းဦး ရုံးချိန်းမှာ တရားလိုပြသက်သေ တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ သုံးပန်လှစံပြကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေး မှူး ဦးဝင်းနိုင်ကို စစ်တယ်၊ ကိုထင်လင်းဦး ရဲ့ ဟောပြောချက် ၁ နာရီ ၄ဝ ကျော်ကြာထဲက စာကြောင်း ၄၊ ၅ ကြောင်းကို ထုတ်ပြီးတော့ တရားစွဲတာပဲ၊ နောက် တတိယအကြိမ်မြောက် အာမခံလျှောက် ထားတာ ရုံးကပယ်ပါတယ်၊ ကျနော်တို့ သဘောတူထားတဲ့အတိုင်းပဲ မုံရွာခရိုင်တရားရုံးကို ပြစ်မှုဆိုင်ရာ အထွေထွေအယူခံတက်မှာပေါ့"
ဦးထင်လင်းဦးရဲ့ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်စောစန္ဒာနဲ့ ရှေ့နေ ဦးသိန်းသန်းဦးက ဦးထင်လင်းဦးကို ရည်ရွယ်ပြီး ပတ္တနိက္ကုဇ္ဇန ကံဆောင်ထားတဲ့ ချောင်းဦးမြို့နယ် သံဃာ့နာယကအဖွဲ့က ဆရာတော် ၅ ပါးကို သွားရောက်တောင်းပန်လျှောက် ထားခဲ့ရာ ဆရာတော် ၅ ပါးက တောင်းပန်မှုကို လက်ခံခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ကျန်ရှိတဲ့ ချောင်းဦးမြို့နယ်က သံဃာတော် အပါး ၃ဝ ကျော်ကိုလည်း မကြာခင်မှာ သွားရောက်တောင်းပန် မှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာလ ၂၃ ရက်နေ့က ချောင်းဦးမြို့နယ်၊ သုံးပန်လှစံပြကျေးရွာမှာ ကျင်းပတဲ့ စာပေဟောပြောပွဲ မှာ ဦးထင်လင်းဦးက ဘာသာ၊ သာသနာ လူမျိုးရေးအယူဝါဒတွေ ၏အကြောင်း ဟောပြောခဲ့တာကြောင့် ချောင်းဦး မြို့နယ် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာန ဦးစီးမှူး ဦးဦးထွန်းခိုင်က တရားလိုလုပ်ပြီး ပုဒ်မ ၂၉၅ (က) ဘာသာ သာသနာ ညှိုးနွမ်းစေမှု ၊ ပုဒ်မ ၂၉၈ ဘာသာ သာသနာကို စော်ကားပုတ်ခတ်ပြောဆိုမှုတို့နဲ့ တရားစွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Nonsense ! Terrible Ma Ha Nayaka ! What we understand from Buddha is that " Analyze and criticize before accept". Now behave like "untouchable".
Jan 01, 2015 11:35 PM
Must do fair trial and give very very severe punishment if he really committed the crime.
Jan 01, 2015 01:19 PM
တေသြး ၊ တသံ ၊ တမိန္
ငါတို့ ကြေးနီစီမံကိန်းအတွက် ငါတို ဦးပိုင် ဝမ်ပေါင်က သိမ်နဲ့စေတီကို ငါတို ဖျက်ဆီးတယ်။
ငါတို ကို့ဆန္ဒပြ တဲ့ လက်ပံတောင်းက ဘုန်းကြီးတွေကို မီးလောင်ဗုံးနဲ့ပစ်တယ်။ ငါတိုက ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပြန်စော်ကားတာ ရပါတယ်
ကိုထင်လင်းဦးက အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ဖြစ်နေတော့ကာမ ရ ဘူး။ ဒါကြောင့်
Jan 01, 2015 01:18 PM
rfa made too much obstacle to writeacomment.some times kept rejecting the comments although fulfill the guide line.
Jan 01, 2015 06:32 AM